ဖုန်းနဲ့ Download လုပ်ရင် Ads Script တွေကိုပိတ်ဖို့ Adguard Premium v2.10.164 apk - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home AdBlock Android Application Phone Application ဖုန်းနဲ့ Download လုပ်ရင် Ads Script တွေကိုပိတ်ဖို့ Adguard Premium v2.10.164 apk
ဖုန်းနဲ့ Download လုပ်ရင် Ads Script တွေကိုပိတ်ဖို့ Adguard Premium v2.10.164 apk
Maung Pauk at 9:19:00 PM AdBlock, Android Application, Phone Application,
ဖုန်းနဲ့ Download လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်ဒေါင်းချင်တဲ့ဖိုင်ကိုမရောက်ဘဲ Ads Script တွေနဲ့ အခြားလင့်တွေ၊ ပေါက်ကရလေးဆယ် ကြော်ငြာလင့်တွေကိုရောက်သွားပြီး တိုင်ပတ်နေခဲ့ရင် ခု apk လေးကို ဒေါင်းပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် ဖွင့်ပြီး Protection Button ကို Enable လုပ်ပါ.. အစိမ်ရောင်လေးဖြစ်သွားပြီး Noti Bar မှာ သော့ပုံလေးပေါ်လာပါမယ်.. ဒါဆိုရင် Active ဖြစ်နေပါပြီ...
Chrome Browser, Firefox Browser နဲ့ Samsung Browser တွေကို Support ပေးတဲ့အတွက် Download Link တွေကို အဲဒီ Browser နဲ့ပဲ ဒေါင်းပါ.. ဘာကြော်ငြာလင့်တွေ၊ Script Code တွေမှ မပေါ်ဘဲ ကိုယ်ဒေါင်းချင်တဲ့ဖိုင်တွေကို စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ.. Adfly, Adfoc, shinkurl စတဲ့ Skip Ads တွေနဲ့ Openload, UsersCloud, DailyUpload စတဲ့ Script များတဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ စမ်းပြီးသားပါ.. ဒါ့အပြင် Apk တွေမှာ ပေါ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ Google Adsense Ads Script တွေကိုလည်း ပိတ်ထားပေးတဲ့အတွက် ဒီ Adguard ကို မဖြစ်မနေ ထည့်ထားပေးသင့်ပါတယ်.. Premium Version ဖြစ်ပြီး Feature တွေ အလုပ်လုပ်ဖို့ Root မလိုအပ်ပါဘူး...
(စကားချပ်- မောင်ပေါက်ရဲ့ www.maungpauk.org ဆိုဒ်မှာတင်တဲ့ Mediafire, pCloud တွေက ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးဝယ်ထားတဲ့ Premium တွေမို့ Ads မရှိဘဲ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလို့ရပါတယ်.. :D )
ဖုနျးနဲ့ Download လုပျတဲ့အခါ ကိုယျဒေါငျးခငျြတဲ့ဖိုငျကိုမရောကျဘဲ Ads Script တှနေဲ့ အခွားလငျ့တှေ၊ ပေါကျကရလေးဆယျ ကွျောငွာလငျ့တှကေိုရောကျသှားပွီး တိုငျပတျနခေဲ့ရငျ ခု apk လေးကို ဒေါငျးပွီး Install လုပျလိုကျပါ.. ပွီးရငျ ဖှငျ့ပွီး Protection Button ကို Enable လုပျပါ.. အစိမျရောငျလေးဖွဈသှားပွီး Noti Bar မှာ သော့ပုံလေးပျေါလာပါမယျ.. ဒါဆိုရငျ Active ဖွဈနပေါပွီ...
Chrome Browser, Firefox Browser နဲ့ Samsung Browser တှကေို Support ပေးတဲ့အတှကျ Download Link တှကေို အဲဒီ Browser နဲ့ပဲ ဒေါငျးပါ.. ဘာကွျောငွာလငျ့တှေ၊ Script Code တှမှေ မပျေါဘဲ ကိုယျဒေါငျးခငျြတဲ့ဖိုငျတှကေို စိတျခမျြးခမျြးသာသာ ဒေါငျးယူနိုငျပါပွီ.. Adfly, Adfoc, shinkurl စတဲ့ Skip Ads တှနေဲ့ Openload, UsersCloud, DailyUpload စတဲ့ Script မြားတဲ့ဆိုဒျတှမှော စမျးပွီးသားပါ.. ဒါ့အပွငျ Apk တှမှော ပျေါပျေါလာတတျတဲ့ Google Adsense Ads Script တှကေိုလညျး ပိတျထားပေးတဲ့အတှကျ ဒီ Adguard ကို မဖွဈမနေ ထညျ့ထားပေးသငျ့ပါတယျ.. Premium Version ဖွဈပွီး Feature တှေ အလုပျလုပျဖို့ Root မလိုအပျပါဘူး...
(စကားခပျြ- မောငျပေါကျရဲ့ www.maungpauk.org ဆိုဒျမှာတငျတဲ့ Mediafire, pCloud တှကေ ပိုကျဆံနဲ့ ပေးဝယျထားတဲ့ Premium တှမေို့ Ads မရှိဘဲ တိုကျရိုကျဒေါငျးလို့ရပါတယျ.. :D )
Download Adguard Premium v2.10.164 apk : 16.64 Mb
AdBlock, Android Application, Phone Application
AdBlock Android Application Phone Application